Bungalows Iibka iyo Ijaarka gudaha Me14 5et, Maidstone, Kent
Bungalows gudaha Maidstone
Bungalows gudaha Kent
Waxa daabacay Ben Siggins
Kent waa degmo ku taal South East England waana mid ka mid ah degmooyinka guryaha. Waxay xuduudo ku leedahay London-woqooyi-galbeed, Surrey dhanka galbeed iyo Bariga Sussex dhanka koonfur-galbeed. Degmadu sidoo kale waxay la wadaagtaa xuduudaha Essex oo ku taal dhinaca wabiga Thames (oo kuxiran dhul loo maro Xawaare Sare iyo Isgoyska Dartford), iyo waaxda Faransiiska ee Pas-de-Calais iyada oo loo sii marayo Channel Tunnel. Magaalada gobolku waa Maidstone. Kent wuxuu ka mid ahaa dhulalkii ugu horreeyay ee Ingiriiska ee laga adkaado oo degto Anglo-Saxons. Katateral-ka Canterbury ee Kent wuxuu ahaa kursiga ugu sarreeya ee Archbishop of Canterbury, oo ah hogaamiyaha Kaniisadda England, tan iyo kacaankii. Kahor taas waxaa dhistay Catholics, oo dib uga bilaabaya isu beddelashada Ingriisiga ee kaatooligga ee Saint Augustine kaas oo bilaabay qarnigii 6aad. Kahor Ingriiska Reform-ka cathedral wuxuu ka mid ahaa bulshada Benedictine moneni ee loo yaqaan Christ Church, Canterbury, iyo sidoo kale inuu yahay kursiga Kaniisadda Katooliga ee Canterbury. Wadaadkii ugu dambeeyay ee Katooliga ahaa ee Canterbury wuxuu ahaa Reginald Pole. Rochester Cathedral sidoo kale wuxuu ku yaal Kent, gudaha Medway. Waa cathedral-kii labaad ee ugu da'da weyn England, iyadoo Canterbury Cathedral ay tahay tii ugu da’da weyneyd. Inta u dhaxaysa London iyo Waddada Dover, oo ka soocda dhul weynaha Yurub, Kent wuxuu arkay diblomaasiyad iyo isku dhac labadaba, laga soo bilaabo wadahadalkii nabadeed ee Leeds Castle 1978 iyo 2004 ilaa Dagaalkii Ingiriiska ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Ingiriiska wuxuu ku tiirsanaa dekedaha gobolka inuu siiyo maraakiibta dagaalka inta badan taariikhdeeda; Dekadaha Cinque ee qarniyadii 12aad – 14aad iyo Chatham Dockyard qarniyadii 16aad – 20aad waxay ahaayeen muhiimad gaar ah. Faransiiska waxaa si muuqata looga arki karaa cimilo wanaagsan oo ka socota Folkestone iyo White Cliffs of Dover. Hills foomka 'North Downs' iyo Greensand Ridge oo dhererkiisu yahay dhererka degmada iyo dooxooyinka taxanaha ah ee u dhexeeya iyo xagga koonfureed ayaa ah inta badan 26-ka degmo ee gobolka. Sababtoo ah tirada badan ee qaraabada midho soo baxa iyo kuwa hodanka ku ah, Kent waxaa loo yaqaan 'The Garden of England'. haulge, logistics, iyo dalxiis ayaa ah warshado waaweyn. Waqooyiga-galbeed warshadaha Kent waxaa ka mid ah soo saarista agabyada dhismaha, daabacaadda iyo cilmi baarista sayniska. Macdanta dhuxusha ayaa waliba qaybteeda ka qaadatay dhaxalka wershadaha ee Kent. Qaybo badan oo Kent ah ayaa ku dhexyaalla badhtamaha magaalada London iyo isku xirka gaadiidleyda ad adag ee caasimada iyo qaaradda dhow waxay ka dhigayaan Kent degmo dakhli sare. Boqolkiiba sideetan iyo siddeed ee degmadu waxay qayb ka tahay laba meelood oo Quruxda Aad u Sareeya: Waqooyiga Downs iyo The We We High.